China China track roller ye KOMATSU dozer undercarriage vagadziri uye vanotengesa | Jinjia
Imwe chete flange, yakapetwa kaviri flange track roller yakakodzera kune anoverengeka 0.2-120 toni mini vacheri uye anorema ekuchera uye mabulldozers. Yakasarudzika vhezheni inotenderera yemigwagwa yekugaya michina, pavers, masango uye zvekurima zvinoshandiswa.
Dhizaini yeiri mbiri kodhi chisimbiso uye hupenyu hwakareba lubrication inoita iyo track roller hupenyu hune hutano uye hunoshamisa kuita.
Hunhu TRACK Roller
1. Kupfuura-kuomarara kana pamusoro-kuomesa roll roll miviri inowedzera kupfeka kuramba uye kuona yakasimba masimba uye kurwisa deformation. Zvisimbiso zvinovimbisa lubrification yekusingaperi kuti igare rakasimba.
2. Hunhu hwezvinhu zvine rollers anosanganisira mahubhu, makorari, bimetal bushings, shaft, uye yakakwira performance seals
3. Kugadzira kweanopisa kugadzira kwekugadzira: roller roller kuwana kune yakanakisa kuyerera kugovera mukati mechimiro chimiro chefibre.
Kusiyanisa kudzimisa kana kuburikidza nekudzima kupisa kupisa kurapwa, iwo anotenderera ane mutswe unodzivirira mhedzisiro uye ane hupenyu hwakareba hurefu.
4.Kukosha Kwemhando: Roller shell zvinhu: 50Mn / 45 # / 40Mn2
Pamusoro Kuomarara: HRC53-56
Kudzima kudzika:> 7mm
Roller mugodhi zvinhu: 45 #
Kudzima kudzika:> 2mm
Roller collar zvinhu: QT450
5. Kugadzira kugona: 5000pcs / Mwedzi. Yekugadzira fekitori yeiyo roller shell, uye Iron kukanda fekitori kune roller collar, machine yezvinhu zvakapedzwa, zvinobudirira uye mhando yepamusoro inogadzirwa.
Matipi etsva track roller yekuisa
1. Kusanganisa matsva uye ekare track rollers kudivi rimwe chete anogona kuzadza iwo matsva sezvavanogara pasi pasi pane iwo akasakara, nekudaro kutora yakawanda yakawanda yekuwedzera huremu.
2. Kana isiri kutsiva ese matsva rollers ezasi, zvinokurudzirwa kukodzera zvese zviri nani hafu kudivi rimwe uye zvese zvitsva kune rimwe divi. Izvi zvinochengeta kunyangwe kumanikidza pane yega roller pasina kuwedzeredza iwo ega.
3. Paunenge uchitsiva roller itsva, usafamba nzendo refu usingamisi muchina kazhinji sezvo ivo vaigona kupisa uye kubata. Mira yega yega 4-5 maminetsi uye enda wakapesana negwara zvishoma kuti ubatsire kutenderera mafuta. Uku ndiko kungwarira kwakazara kwemaawa zana ekutanga
Pashure: Teedzera Shangu Kune Crawler Track
Zvadaro: komatsu track link assy mugadziri muChina
Kaviri Flanged Track Rollers